meditation | Cosmos koobi karayn
Posted in xad la'aan . nolosha . bannaan . meditation . dhaqanka
Oo giraanta, oo dhamaatay, oo wuu ku foodhyi
Yaa sameeyey oo dhan ayna si ayna
shabagyada timaha Rosehip fahmaan, si sax ah ugu gabyaya;
kuwaas oo dhakada, aabbahaa u dhashay,
Gimlet si fudud u daloolin
Iyo sidoo kale is qaadqaad saaray
laanta Dewy Jidka calooshiisa ka,
Si ay u tagaan booqasho dandy a;
Kaasoo dhakada, si sax ah galaas,
Waxay ahayd laanta dewy samada madow, -
Xiddigahana waxaa lagu waxyoonay gabbaro
isaga u, kaynta saqda dhexe permeable.
nolosha – meditation joogto ah. Energy ka Isbadal Cosmos waxaa bixisey in jirka ama qaybo ka mid ah la karsado. Sayidka nolosha oo dhan la raacio meditation.
В общем виде объект медитации представляет собой процесс получения Энергии посредством использования имеющихся в организме энергетических центров. Sida caadiga ah waxaa loo yaqaannaa “chakras”.
Degree ee fiirsashada tamarta ee chakra kasta amar of magnitude hoos taagan, haddii ay u taagan yahay, siday u kala horreeyaan, oo ay soo noqnoqoshada gariirka in mid ka mid ah qaybaha guud ee.
chakra kasta wuxuu leeyahay podchakry, taasoo ah tiro la mid ah sida oo dhan chakras ee jirka. Waayo, socodka tamarta ugu guda jiro fikirka fiican in la isticmaalo a podchakry pass sare: kala duwan oo ka mid ah, laga bilaabo guduud, Love ama Live dareenkaa. Laakiin waqti isku mid ah natiijada ugu wanaagsan arkin resonance dhan chakras heli karaa kasta oo kale oo.
meditation tier toos ah ugu xiran la chakra ugu horeysay been ah Energii nuugista toosan, ku jira walxaha. Oo, tamarta waa in ay daruuri noqon aqbali karo nuugista by jidhka. Haddii tamarta aan la aqbali karin – meditation sida waa dishaan la'ahay ama deg deg ah. Si heerka koowaad ee fikirka la xidhiidha geedi socodka nuugista cuntada. Haddii ay dhacdo in la joogo ma jiro dhamaystirmo oo ha baabbi'iyo cuntada kuu ogolaanaya in aad si aad u hesho aragti ah – robab dhacdaa shaqeeyo. Haddii kale, u damaysay aan la gaari at dhan.
meditation heerka labaad – Waxaa la xiriirtay in qofka ka mid ah falalka jidhka dareenka, ama chakra labaad. Waxa intaa dheer in warshadu hawada ku toosan ama nuugista of caadifadaha iyadoo la kaashanayo jidhka noocan oo kale ah ay iman karaan resonance. Mid ka mid ah fikirka ugu daran oo Ciyaalle waa Tantra, kaas oo si toos ah xiriir la chakra labaad.
meditation heerka saddexaad – dhamaystirmo la xidhiidha dhaqaaqin, dhaqdhaqaaqa, kinetics. Dhammaystir dhaqdhaqaaqa, farxad iyo raali ahaanshaha wadida, ma aha oo kaliya on natiijada, laakiin sidoo kale on geedi socodka dhaqdhaqaaqa. farsamada yaabka leh laygu ku filan – Waxaad isticmaali kartaa inta jeer gariirka this sidoo kale waa in, inay galaan resonance.
meditation heerka afaraad – ah, taas oo caan ku ah jirka qoyska: farxad, Raalli ahaanshaha iyo Raaxo ee dareenka of gariirka jirka qoyska.
meditation heerka shanaad – наполнение энергией в результате взаимодействия с искусством и продуктами искусства.
meditation heerka lixaad – in la kordhiyo mugga gudaha ay sabab u tahay xaqiijinta tamarta, fahamka qaababka kala duwan iyo xigmad u gaar ah loo kordhiyo.
meditation heerka toddobaad – dareenkaa habka raasamaal.
darajooyinka kala duwan ee meditation dhigmaan u gaar ah lakab oo miyir.
Wadarta ka daadanayo tamarta ka kor hoose guuro, xoogga iyo isu keenida ka chakra in chakra. Haddii tamarta helay ee chakras hoose – waxaa loola jeedaa, waxay bilaabi doonaan in ay ku kici oo ay bilawdo chakras wareeg sare si. Taasoo keeni doonta in loo baahan yahay in uu sameeyo, meditation ama xaq kasta oo kale oo, ama si dadban. Haddii aanay ka dhigi – waxaa awood xad-dhaaf ah, taas oo ayna miiqdaan chakra xoog lagama maarmaan ah. Taasi waxay noo ogolaaneysa in ay tixgeliyaan munaasabadaha sida gaajada jirka ah, soo jireenka ah ee jirka gaar ah oo la xidhiidha in ama chakra kale.
Haddii jidhka oo waa awood aan helin – ma quudin => muddo ka la'aanta ah ee tamarta ay jirto dareen gaajo, si loo xakameeyo oo u baahan qaadashada tamar. Waxay dhici kartaa iyada oo sababtu tahay meditation. Haddii ay awoodaan in ay og dhigi-fikirka sare, sidaas saara jidhkooda badalkooda sare – tamarta this waxaa laga yaabaa in meydadka ku filan si ay u buuxiyaan iyo hoose. Xaaladdan oo kale, waa la tixgelin karaa dhamaystirka tamarta iyo hay'adaha noolaha sabab u ah dib-socodka awood.
Haddii korontadu waa bixisey in mid ka mid ah chakras hoose – waxaa lagama maarmaan ah in ay kor u, marayay ah chakras kale. Sayidka, tamarta mari doona wareega khasab ah. Haddii mid ka mid ah xarumaha tamarta aan ka dhigi doonaa wareeg lagama maarmaanka ah – taasi waxay keeni doontaa in baraaruga ee gaajo jidhka ku baahisey. Si looga hor – u baahan tahay:
1) Ama dhis daboolo baahiyaha nafsaaniga ah ee khuseeya ee jirka.
2) Or ka horjoogsanaya in ay chakras hoose iyo quudin via sare ee loop ka.
Ugu xumaa ee dhan, in ay dhici karaan-kaca kadis caasiyoobay in ay dhacdo excitation of chakras aan dheer, haddii hore laga saaray muhiim ah oo aan Love. Haddii kale, Sabuul lahayn ma dhici doonto.
Haddii si buuxda u baabi'iyo qaadashada tamarta – jirka u engegay ay sabab u tahay daal. teknoolajiyada sida “ismiidaamin ah” isticmaalka Awooddii qasabka Halaag qarsoonayd “addoomo caasi”. Её можно разделить на две части:
1) In maskaxda oo Hanatay arinku cad Carar dhigay in gariirka ee hirka sare. Iyo sababta oo ah heerka u hooseeya ee horumarka ay ay u muuqdaan aan qiimo lahayn oo aan dhabta ah.
2) Устанавливается полный контроль на все низкочастотные проявления и возможность удовлетворения низкочастотных потребностей, iyo sidoo kale socday deification of Goobaha Frequency Low. Waxaa laga yaabaa in, lacag. nidaamka fudud: “Haddii aanad haysan wax lacag, I(rabovladelets Tvoy) sii daayo – Waxaad iibsan kartaa alaabta iyo muuqaalada si loo daboolo baahiyaha nafsaaniga ah ee u shaqeeyo. Tani waxay noqon doontaa sababta aad daal, ku xiga marka aad dhimato. Laakiin waxaan ma aragto: maxaa yeelay,, baytariyada aad sida aan qabo balaayiin. waa kan Ilaah aad wax fikrad ah – Sidaa darteed u dhintaan, Doqon.” Sababo la wareeg joogtada ah ee rakibo meel maskaxda addoommo ah ay deification.
Xaaladahan oo kale, waxaa ku Culustahay aad u ku haboon in laga saaro ka chakras hoose ee nolosha, kuwaasi oo loo isticmaalo ee baahida total gacanta ku adoonka. Samee u qalantaa halka ilaa caqabad rujin, и в Мире восторжествует справедливость, taas oo abuuri doonaa xaaladaha wanaagsan loogu talagalay horumarinta hoose-dhexe.
Waxaa la qadariyo doonaa in kasta oo daaqa tamarta xad-dhaafka ah ee jirka waxay keeni kartaa in misalignment ee hawlaha u shaqeeyo oo dhan iyo dhaawac. In this, in ay dhacdo gaajo ah mid ka mid ah jirkooda loo baahan yahay inuu fikiro si kasta oo suurto gal ah. Waxaa aad u fiican in la isticmaalo-fikirka sare – ka dibna lagu qasbay xoogga dambiilayaasha iyo gacankudhiiglayaasha adduunka oo waxay yeelan doonaan lahayn fursadaha ay gacanta ku.
Snake Earth Energy, In jidhka, Waxaa guuro wadada arrin adag ka hor inta meel, samaynta wareeg in dhammaan xarumaha tamarta si. Haddii jidka this waxaa lagu xusay in waqti-bannaan ee – waxa ay noqon doontaa sida abeesada. In Kundalini tani waxaa la yiraahdaa abeesadii tamarta.
⊡ ☯ Jiritaanka – Fikirkaygu on GANGA ♥ • ●
Чакр вообще больше 100. В местах изгибов частей тела всегда есть чакра. А про нижние частоты пока нет стремления рассказывать, потому что может возникнуть неконтролируемая ситуация, а т.к. на НЧ проявления общественность реагирует больше чем на ВЧ – в итоге всякие мошеннические научные институты припишут себе все заслуги, рекламируя наши (bannaan) технологи от собственного имени. В научном мире вообще воровства больше чем в любой другой области жизни. Не особенно интересно забивать голову ненужными переживаниями.